टुसा पलाएको प्याँज खाँदाका फाइदा - Nepal Sanchar
टुसा पलाएको प्याँज खाँदाका फाइदा
२७ श्रावण २०७७, मंगलवार ०५:२६
अङ्कुरित प्याँज खानुका थुप्रै स्वास्थ्य फाइदाहरू छन्। यसमा प्रशस्तै प्रोटिन पाइन्छ र यसलाई भिटामिन-ए, बी र सी को राम्रो स्रोत मानिन्छ। पोटासियम, फलाम र क्याल्सियम समेत पाइने प्याँजको टुसामा डल्ला प्याँजको तुलनामा बढि नै पौष्टिक तत्व लुकेर बसेको हुन्छ। किनभने कुनै पनि बिरुवा पलाउनका लागि त्यसलाई प्रशस्त पौष्टिक तत्वको खाँचो पर्दछ र त्यसले डल्ला प्याँजबाटै सोस्दै आफ्नो विकासको लागि प्रयोग गर्दछ।
यसमा हुन प्रोटिन हाम्रो शरीरका हरेक अङ्ग र कोषको लागि अत्यावश्यक तत्व हो। कपाल र नङ अधिकांश प्रोटिनबाटै बनेको हुन्छ। क्षय भएर गएका तन्तू र कोषहरूलाई मर्मत गर्न शरीरले प्रोटिनकै मद्दत लिने गर्दछ। छाला, मांशपेसी, हरमोन तथा रगत निर्माणको लागि प्रोटिनकै आवश्यकता पर्दछ।
प्याँज वा लसुनको टुसामा हुने भिटामीन-ए को मूख्य काम भनेको हाम्रो आँखाको दृश्यक्षमतामा सुधार ल्याउनु हो। त्यसका साथै यसले हाडलाई बलियो बनाउन, छालालाई स्वस्थ राख्न र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउन पनि मद्दत गर्दछ।
हाम्रो शरीरलाई एक जटिल यन्त्रको रूपमा हेर्न सकिन्छ। जसरी त्यो यन्त्र राम्रोसँग चल्नको लागि नियमित मर्मतसंभार, तेल र इन्धनको आवश्यकता पर्दछ, त्यसरी नै हाम्रो यन्त्ररूपी शरीरलाई इन्धनरूपी भिटामिन-बी को आवश्यकता पर्दछ। यसले हाम्रो शरीरमा जति पनि अङ्गहरू छन्, सबैको स्वास्थ्यलाई हेरचाह गर्ने काम गर्दछ।
भिटामिन-सी लाई सबैभन्दा सुरक्षित र प्रभावकारी पौष्टिक तत्वको रूपमा मानिन्छ, जसले विशेष गरी हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाई शरीरमा आउन लागेका सङ्क्रमण र रोगव्याधलाई हटाउने काम गर्दछ। यसलगायत प्याँजको टुसामा पाइने अन्य पौष्टिक तत्वहरूले पनि हाम्रो शरीरमा अनेकौँ फाइदा गराउँदछ।
त्यसैले अब देखि कसैले उम्रेको प्याँज फाल्न लागेको छ भने उसलाई यी कुराहरू सम्झाएर त्यसलाई सेवन गर्न प्रोत्साहन गर्नुहोला। स्वस्थ जीवन जिउनका लागि ठूलो कदमको आवश्यकता पर्दैन। यस्ता-यस्तै स-साना कुराहरूलाई बानीको रूपमा बसाल्दै लगेपछि मात्रै स्वस्थ जीवनको सुरुवात हुन थाल्दछ।
रामरेखामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना
गण्डकीमा चिकित्सक, पर्यटक प्रहरी सहित २० जनामा कोरोना सङ्क्रमण
मेसिनको क्षमता विस्तारसँगै गण्डकीमा द्रुत परीक्षण
खाना खानेबित्तीकै सुत्ने बानी छ ? होसियार !
पसिनाले काखी गनाँउछ ? यसरी हटाउन दुर्गन्ध !
डण्डीफोर हटाउन यी खानेकुरा खाने गर्नुहोस
अहिलेसम्मकै धेरै २०२० जनालाई कोरोना संक्रमण